Shir ku saabsan dowlad wadaajinta oo dib loo dhigay | Star FM
Home Wararka Kenya Shir ku saabsan dowlad wadaajinta oo dib loo dhigay
Shir ku saabsan dowlad wadaajinta oo dib loo dhigay
Golaha ay ku mideysan yihiin hoggaamiyaasha ismaamullada wadanka ee CoG ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dib loo dhigay shir uu qorshuhu ahaa inuu qabsoomo 23-ka ilaa 26-ka bishan siddeedaad.
Kulanka oo sanadla ah ayaa lagu waday in lagu qabto ismaamulka Makueni ee bariga dalka si looga hadlo arrimaha dowlad wadaajinta.
Nidaamka dowlad wadaajinta ayaa Kenya ka dhaqangalay sanadkii 2013-kii waxaana tan iyo xilligaasi la qabanayay shirar sanadla ah oo lagu qiimeynayo horumarka lagu tallaabsaday ee ismaamullada.
Guddoomiyaha golaha CoG ahna barasaabka dowlad deegaanka Embu Martin Wambora ayaa dadweynaha ku wargeliyay in laga fuursan waayay in shirka dib loo dhigo.
Waxaa uu xusay inay fahansan yihiin in xilliga adag lagu jiro sidaas awgeedna ay lagama maarmaan tahay in mudnaanta koowaad la siiyo badqabka cid kasta.
Mr. Wambora ayaa intaa ku daray inay go’aankan qaateen iyagoo ku saleynaya amarkii uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ku mamnuucay isku imaatinka dadweynaha iyo kulamada.
Bayaanka waxaa ku cad in xilliga ku habboon la shaacin doono taariikhda la qabanaya shirka dowlad wadaajinta ee sanadka 2021-ka.
Dhanka kale golaha barasaabyada ee CoG ayaa dhammaan shacabka Makueni iyo kuwa ku nool ismaamullada dariska la ah ee Machakos Iyo Kitui ugu baaqay inay sii wadaan qaadashada tallaalka ka dhanka ah cudurka COVID-19.
Dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu cudurka ku sii faafaya ismaamullada wadanka u aaneeyay inaan si buuxda loogu hoggaansamin amarrada iyo tallaabooyinka wasaaradda caafimaadka.
Muddo hal toddobaad ah 18 ka mid ah dowlad deegaanada dalka ayaa kiisaska caabuqa corona ee laga diiwaan geliyay waxay kor u dhaafayaan boqolkiiba 20.
Ismaamulladan waxaa ka mid ah Kiambu, Nyandarua, Murang’a, Makueni, Machakos, Baringo, Meru iyo Nyeri.
Previous articleTirada kenyaanka laga soo dadgureeyay Afghanistan oo korortay
Next articleDHAGEYSO:Kenyaanka oo muujiyay rajadooda ku aaddan go’aanka maxkamadda ee BBI